Dhoobe Daareed, oo Deni ku tilmaamay nin ilaalinaya dano uu leeyahay Imaaraadku. | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Dhoobe Daareed, oo Deni ku tilmaamay nin ilaalinaya dano uu leeyahay Imaaraadku.
Dhoobe Daareed, oo Deni ku tilmaamay nin ilaalinaya dano uu leeyahay Imaaraadku.
Guddoomiyihii hore ee barlamaanka maamulka Puntland, Cabdixakiin Dhoobo Daareed, ayaa ku eedeeyay madaxweyne Siciid Cabdillaahi Deni in uu Muqdisho ujoogo sidii uu ufulin lahaa dano gaar ah oo deegaannada Puntland uu kaleeyahay waddanka Imaaraadku.
“Madaxweyne Deni uma joogo Muqdsiho dano umadda Somaliyeed ama reer Puntland, ee wuxuu halkaas u joogaa sidii u carqaladayn lahaa heshiiska la gaaray iyo inuu ilaaliyo danaha Imaaraatka,” ayuu yiri Dhoobo oo wareysi siiyay Telefeshionka Somali Cable.
Guddoomiyihii hore ee barlamaanka Puntland ayaa marar badan saxaafadda eedaymo u marsiiyay madaxweyne Deni tan markii xilka looga tuuray mooshin ay xildhibaanada Puntland ka keeneen 7 November 2019.
Dhoobo Daareed ayaa saxaafadda horey uga sheegay in Deni uu dhaqaale ku siiyay xildhibaanada in sifo sharci darro ah lagu rido, sidoo kalena uu masuul ka ahaa iska hor imaadkii ka dhacay xarunta barlamaanka saacaddo kahor inta aan la ridin.
Farmaajo,siduu isaga reebi karaa Khayre oo ah ninka udag ee la tartamaya?
3-dii caqabadood, ee hortaagnaa shirka Muqdisho, maxaa iska beddelay?
Somaliland oo dalbatay wadahadal ay la gasho DF
Banaanbaxyo Rabshado watay oo maanta ka dhacay Gaalkacyo